Mobile harbour crane / Ship-to-Shore Gantry crane တဈလကျဟာ တဈနာရီကို ပေ ၂၀ ကုနျသတ်ေတာ အမြားဆုံး ဘယျလောကျ အထိအတငျ/အခြ လုပျနိုငျသလဲ? - Logistics Guide
အမရေိကနျနိုငျငံ အနောကျဘကျကမျးက Long Beach ဆိပျကမျး၊ Total Terminal International ၏ Pier T terminal တှငျ ကရိနျးမောငျးသူနှဈဦး (Branko Sindicich နှငျ့ John Gabriellini) က ကရိနျးတဈလကျ တညျးဖွငျ့ အလုပျခြိနျ ၈ နာရီ တဈဆိုငျးအတှငျး ပေ၂၀ ကုနျသတ်ေတာ ၅၆၄ လုံးကို သင်ျဘော အတငျအခပြွုလုပျပွီး ကရိနျးတဈလကျ၏ စှမျးဆောငျနိုငျမှု (crane productivity) အမြားဆုံး စံခြိနျသဈ တငျသှားပါတယျ။ တဈနာရီကို ပမျြးမြှအလုံး ၇၀ နူနျးဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျအနောကျဖကျကမျးဆိပျကမျးတှရေဲ့ crane productivity ဟာ တဈနာရီကိုပမျြးမြှ ၂၅ လုံးဝနျးကငျြဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျဆိပျကမျးက Terminals တှကေတော့ တဈနာရီပမျြးမြှ ကုနျသတ်ေတာ ဘယျနှဈလုံး သင်ျဘောအတငျအခလြုပျနိုငျသလဲမသိဘူး။မေ ၁၅ ရကျနကေ့ အဆိုပါ Terminal မှာ ကပျထားတဲ့ ၄ရကျတာ ကာလ အတှငျး TEU ၁၁,၀၀၀ သယျနိုငျတဲ့ Gudrum Maersk သင်ျဘောပျေါကို/ပျေါက ကုနျသတ်ေတာ ၉၃၀၀ အား အတငျအခြ လုပျသှားတာဖွဈပါတယျ။
Total Teiminal International ဟာ Hanjin Shipping က ဒဝေါလီမခံမီ ၂၀၁၆ အထိ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိ MSC လိုငျးက ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
Long Beach port ဟာ ၂၀၁၈ မလေအတှငျး သှငျးကုနျ ကုနျသတ်ေတာ ၃၆၁,၀၅၆ TEUs ၊ ပို့ကုနျ ကုနျသတ်ေတာ ၁၄၂,၄၁၂ TEUs နှငိ့ ကုနျသတ်ေတာအခှံ ၁၈၃,၉၅၉ TEUs စုစုပေါငျး ၆၈၇,၄၂၇ TEUs ကိုငျတှယျနိုငျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ သင်ျဘောလိုငျးပေါငျး ၁၇၅ လိုငျးဆိုကျကပျပွီး၊ဆိပျကမျးပေါငျး၂၁၇ခုဖွငျ့ခြိတျဆကျထားကာ၊ Long Beach ဆိပျကမျးမှ ကုနျသှယျမှုတနျဖိုး နှဈစဉျ $၁၈၀ ဘီလီယံရှိပါတယျ။
၂၀၁၇ နိုဝငျဘာလ ၁၇ ရကျကလညျး အမရေိကနျနိုငျငံ အနောကျဘကျကမျး Port of Los Angeles ၏ AMP Terminal, Pier 400 ဟာ Maersk Evora သင်ျဘောအတှကျ ကုနျသတ်ေတာ ၂၄၈၄၆ TEUs ကို ၁၂၈ နာရီအတှငျး အတငျအခလြုပျနိုငျလို့ ဆိပျကမျးတံတားတဈခု၏ စှမျးဆောငျနိုငျမှု (Berth Producity) အမြားဆုံး စံခြိနျသဈတငျနိုငျတဲ့ သတငျး post တငျထားဘူးပါတယျ။
Mobile harbour crane / Ship-to-Shore Gantry crane တစ်လက်ဟာ တစ်နာရီကို ပေ ၂၀ ကုန်သေတ္တာ အများဆုံး ဘယ်လောက် အထိအတင်/အချ လုပ်နိုင်သလဲ?
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းက Long Beach ဆိပ်ကမ်း၊ Total Terminal International ၏ Pier T terminal တွင် ကရိန်းမောင်းသူနှစ်ဦး (Branko Sindicich နှင့် John Gabriellini) က ကရိန်းတစ်လက် တည်းဖြင့် အလုပ်ချိန် ၈ နာရီ တစ်ဆိုင်းအတွင်း ပေ၂၀ ကုန်သေတ္တာ ၅၆၄ လုံးကို သင်္ဘော အတင်အချပြုလုပ်ပြီး ကရိန်းတစ်လက်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (crane productivity) အများဆုံး စံချိန်သစ် တင်သွားပါတယ်။ တစ်နာရီကို ပျမ်းမျှအလုံး ၇၀ နူန်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အနောက်ဖက်ကမ်းဆိပ်ကမ်းတွေရဲ့ crane productivity ဟာ တစ်နာရီကိုပျမ်းမျှ ၂၅ လုံးဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းက Terminals တွေကတော့ တစ်နာရီပျမ်းမျှ ကုန်သေတ္တာ ဘယ်နှစ်လုံး သင်္ဘောအတင်အချလုပ်နိုင်သလဲမသိဘူး။မေ ၁၅ ရက်နေ့က အဆိုပါ Terminal မှာ ကပ်ထားတဲ့ ၄ရက်တာ ကာလ အတွင်း TEU ၁၁,၀၀၀ သယ်နိုင်တဲ့ Gudrum Maersk သင်္ဘောပေါ်ကို/ပေါ်က ကုန်သေတ္တာ ၉၃၀၀ အား အတင်အချ လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Total Teiminal International ဟာ Hanjin Shipping က ဒေဝါလီမခံမီ ၂၀၁၆ အထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ MSC လိုင်းက ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Long Beach port ဟာ ၂၀၁၈ မေလအတွင်း သွင်းကုန် ကုန်သေတ္တာ ၃၆၁,၀၅၆ TEUs ၊ ပို့ကုန် ကုန်သေတ္တာ ၁၄၂,၄၁၂ TEUs နှငိ့ ကုန်သေတ္တာအခွံ ၁၈၃,၉၅၉ TEUs စုစုပေါင်း ၆၈၇,၄၂၇ TEUs ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သင်္ဘောလိုင်းပေါင်း ၁၇၅ လိုင်းဆိုက်ကပ်ပြီး၊ဆိပ်ကမ်းပေါင်း၂၁၇ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားကာ၊ Long Beach ဆိပ်ကမ်းမှ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး နှစ်စဉ် $၁၈၀ ဘီလီယံရှိပါတယ်။
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်း Port of Los Angeles ၏ AMP Terminal, Pier 400 ဟာ Maersk Evora သင်္ဘောအတွက် ကုန်သေတ္တာ ၂၄၈၄၆ TEUs ကို ၁၂၈ နာရီအတွင်း အတင်အချလုပ်နိုင်လို့ ဆိပ်ကမ်းတံတားတစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (Berth Producity) အများဆုံး စံချိန်သစ်တင်နိုင်တဲ့ သတင်း post တင်ထားဘူးပါတယ်။
Credit : Thant Zin
ShiptoShore Gantry crane